Home / Career Opportunities for Business Management Students
ကျောင်းပြီးခါနီးလို့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲ ဝင်ရောက်ရတော့မယ်လို့ စဉ်းစားလိုက်တိုင်း ကျောင်းသားအများစုအတွေးထဲမှာ ပေါ်လာလေ့ရှိတာက ကိုယ်ရွေးချယ်တက်ရောက်လိုက်တဲ့ Major နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ဘယ်လို Career ကို ရွေးချယ်လုပ်ကိုင်ရမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါပဲ။
ဒီလို အခြေအနေမျိုးက Business Management ဘွဲ့ရ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအများစုမှာ ဖြစ်လေ့ရှိတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ဘာကြောင့်ဆို Business Management ဆိုတဲ့မေဂျာက သင်ယူလေ့လာရတာကျယ်ပြန့်သလို Business Management နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Career တွေက ယနေ့ခေတ်မှာဆို အများအပြား ပေါ်ပေါက်လာပြီဖြစ်ပြီး အသစ်လွင်ဆုံး အိုင်ဒီယာတွေနဲ့လည်း နေရာအနှံ့အပြားမှာ အလွယ်တကူ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်နေပြီမို့လို့ပါ။
ကဲ ဒီလိုဆို Business Management ဘွဲ့နဲ့ လျှောက်လှမ်းရမယ့် Career Pathway မှာ ဘယ်လို Career Opportunities တွေ ရှိနေပြီလဲ?
Business Management ဘွဲ့ရတွေကို များသောအားဖြင့် Organization တစ်ခုမှာ Skillful Decision Makers, Problem Solvers, Strategic Thinker နဲ့ Natural Leader တွေအဖြစ် သတ်မှတ်လို့ရတဲ့ အရည်အချင်းရှိသူတွေလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တိုင်းလိုလိုမှာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လို့ ရသူတွေလို့ ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူး။
ဒီတော့ Business Management နဲ့ဘွဲ့ရလိုက်တိုင်း Business Leadership တွေ Management Roles တွေကိုပဲ ပြေးမမြင်လိုက်ပါနဲ့ဦး။
Business Management Degree နဲ့အတူ ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Financial Situation တွေ Tax တွေ Expenditure တွေကို စိစစ်တွက်ချက်ပြီး Accounting & Finance နယ်ပယ်မှာ Professional အဖြစ်ရပ်တည်မလား? ဒါမှ မဟုတ် Business Management ဘွဲ့ရ လူငယ်အများအပြားလိုအပ်တဲ့ Sales & Marketing Industry မှာ Market Industry ကို Analysis တွေ လုပ်ရင်း Marketing Strategies တွေကို Develop လုပ်ကြမလား? Recruitment, Training တွေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို စီမံခန့်ခွဲရမယ့် Human Resource Management နယ်ပယ်မှာပဲ လုပ်ကိုင်ကြမလား? ဒါမှမဟုတ် ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူငယ်တွေ အများအပြား ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လိုတဲ့ Media & Advertising Industry မှာ Technology နဲ့ Market Trends တွေကြားမှာ ရပ်တည်ရင်း ကိုယ့် Potential ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားမလား? ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်တိုင်လေ့လာသင်ကြားခဲ့ရတဲ့ ပညာရပ်တွေနဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ပေါင်းစပ်အသုံးချရင်း Entrepreneur တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်မလား?
ဘယ်လို Career Pathway ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါစေ …
သီအိုရီတွေ၊ စာတွေ့လက်တွေ့တွေနဲ့ သင်ယူလေ့လာထားတာအားလုံးကို လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာ ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် တွန်းအားပေးနိုင်တာက သင်ရွေးချယ်တက်ရောက်ထားခဲ့တဲ့ Business Management Degree ရဲ့ အားသာချက်ပါ။ ဆိုလိုချင်တာက Business Management Degree ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတာ ဘယ်လို လုပ်ငန်း နယ်ပယ်မျိုးမှာမဆို ဘဝရဲ့ Stepping Stone အဖြစ် အသုံးချနို်င်တဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားလိုက်တာပါ။
ဒီတော့ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ “The only way to do great job is to love what you do” လို့ Steve Jobs ဆိုခဲ့သလိုပါပဲ။ ကိုယ်လျှောက်လှမ်းရမယ့် Career Pathway မှာ ကိုယ်ရရှိမယ့် Career Opportunities တွေ အများကြီးထဲက ကိုယ်တကယ့် Passionate အဖြစ်ဆုံးတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြီး အောင်မြင်တဲ့ ဘဝတစ်ခုကို တည်ဆောက်လိုက်ပါ။